मध्यमवर्ग किन तानिए शेयर बजारमा ?
अधिकांश नेपालीका लागि अनजान रहँदै आएको शेयर बजार मध्यम वर्गको कौतूहल, आकर्षण र अवसरको केन्द्र बन्न थालेको छ। देशको अर्थतन्त्र थला परेका वेला शेयर बजारले किन चमक पाइरहेको छ? अहिलेको अभूतपूर्व छलाङ कति जोखिमपूर्ण छ? यी विषय नबुझी लगानी गर्दा ‘मूल्यपासो’मा पर्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।
लमजुङमा ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको पिपुल्स हाइड्रोले ८२ लाख ५० हजार कित्ता साधारण शेयर (आइपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ।
२ माघदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्यांकको आईपीओ आउने, आवेदन दिने सबैले शेयर पाउने
२ माघदेखि इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्यांकको सार्वजनिक निष्काशन (आईपीओ) आउने भएको छ। यो ब्यांकको आईपीओ नेपाली पूँजी बजारको इतिहासमा हालसम्मकै ठूलो हुने भएको छ।
राजनीतिक अन्योलका बीच शेयर बजारमा उछाल शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा मंगलबार उछाल आएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएपनि शेयर बजारले लगानीकर्ताको उत्साहलाई कायम राखेको देखिएको छ।
राजनीतिक अनिश्चयको छायाँ शेयर बजारमा, नेप्से एकै दिन झण्डै १०० अंकले घट्यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै शेयर बजारमा डरलाग्दो पहिरो गएको छ। राजनीतिक अनिश्चय बढेसँगै लगानीकर्ताहरू निराश हुँदा आइतबार बजार ४.२५ प्रतिशतले घटेको हो।
नेप्सेमा आज नयाँ रेकर्ड कायम, सात अर्ब माथिको कारोबार
धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। लगातार नयाँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको नेप्सेमा आज पनि ७१ अङ्कको वृद्धि देखिएको हो। नेप्से र कारोबार रकम समेत आज नयाँ विन्दुमा पुगेको मात्रै छैन, नयाँ रेकर्ड पनि कायम भएको छ।
लगातार दोहोरो अङ्कको वृद्धि तथा कारोवार रकममा समेत नयाँनयाँ कीर्तिमान कायम गरेको शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक आज भने झिनो अङ्कले मात्रै उकालो लागेको छ।
किन यसरी बढ्यो शेयर बजारको रौनक ?
अर्थतन्त्रमा निराशाकाबीच के कारण छ जसले बजारलाई चम्किलो बनाइरहेको छ ? बजारका लगानीकर्ता तथा विश्लेषकहरू एक मात्र होइन, धेरै कारणले बजारमा छलाङ आएको अनुमान गर्छन्।
शेयर बजारमा अहिलेसम्मकै धेरै कारोबार, बजार पूँजीकरण रू. २४ खर्ब नजिक शेयर बजारको कारोबारमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक धेरै रकमको कारोबार भएको छ। बिहीबार शेयर बजारमा रू. ६ अर्ब ११ करोड ६७ लाखको कारोबार भएको हो। बुधबार रू. ३ अर्ब ४१ करोडको शेयर किनबेच भएको थियो।
शेयर बजारमा उत्साह कायमै, २३ अंकले बजार बढ्यो तिहार विदापछि खुलेको शेयर बजारमा बुधबार फराकिलो अंकको वृद्धि भएको छ। नेप्से परिसूचक २३.३२ अंकले बढेर १ हजार ७४२ विन्दु पार गरेको छ।
नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, कारोबार रकम झण्डै रू. ५ अर्ब साताको अन्तिम दिन बिहीबार धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। लगातार उकालो लागेको नेप्सेमा बिहीबार झण्डै ११ अङ्कको वृद्धि भएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से १०‍.८२ अङ्कले वृद्धि भई एक हजार ७१८.४९ मा पुगेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ३.२७ विन्दुले उकालो लागेर ३३८.८९ मा पुगेको छ।